မိုးသီးဇွန် သို့မဟုတ် မှားသီးဇွန် ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Wednesday, August 21, 2013, under ဆောင်းပါး |3comments
၀မ်းနည်းတာကတော့ နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလမှာ ကိုမိုးသီးဇွန်တစ်ယောက် ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ ခံစားရလို့ ၀မ်းနည်းတာပါ။
ဒီငွေရတုပြီးမှသာ Reconcilatilon Argenta လုပ်သင့်တယ်။ အခုလုပ်တာ နည်းနည်းရောထွေးနေတယ်လို့မြင်တယ်။ ကျဆုံးသွားတဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအတွက် ခံစားချက်တွေ ထုတ်ပေးရမယ့်ပွဲပေါ့။ 0utlet တွေ ထွက်အောင် လုပ်ပေးရမှာ။ ၂၅နှစ်တာ ကာလမှာ ခံစားခဲ့ရတာတွေကို ဖြေသိမ့်ပေးရမှာ။ ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပေးရမယ့်ပွဲကြီးပေါ့။ အဲဒီအစား နိုင်ငံရေး အာဂျင်တာတွေနဲ့ သွားရောထွေးလိုက်တဲ့အခါ အရမ်းနားလည်မှုတွေလွဲတာ တွေ့ရတယ် “လို့ ကိုမိုးသီးဇွန် ပြောသွားတာကိုတော့ သဘောတူတယ်။
အမေရိကန် ပတ်စပို့ပြလိုက်တာနဲ့ အရာခပ်သိမ်း တံခါးကပွင့်သွားတယ်။ သော့ကြီး ကမ္ဘာ့ရွှေသော့ကြီး ကျွန်တော့်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ မြောက်တောက်တောက် စကားလည်း လက်ခံပါသေးတယ်။ ( ဒါပေမယ့် အဲဒီရွှေသော့ကြီးနဲ့ အယ်လ်ကိုင်ဒါတို့၊ တာလီဘန်တို့ရဲ့ တံခါးတွေတော့ သွားမဖွင့်မိစေနဲ့ပေါ့ဗျာ )
ကိုဋ္ဌေးကြွယ်တို့၊ ကိုကိုကြီးတို့လို ကိုမိုးသီးဇွန်လည်း နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ချင်တယ်၊ ပါတီထောင်ချင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် လူတစ်ယောက်ဟာ ရင့်ကျက်ဖို့လိုပါတယ်။ အနေအထိုင် အပြောအဆိုတွေ အမှားအယွင်းနည်းဖို့လိုပါတယ်။ အကြောင်းအရာနည်းဖို့လိုပါတယ်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ခရေစေ့တွင်းကျ နားမလည်ဘဲ စကားမကျွံမိဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။
ရှေးက မြန်မာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုမိုးသီးဇွန်က မန္တလေးရဲ့ ဒီနားမှာပဲ ယိုးဒယားတန်းတွေရှိတယ်။ ဟိုဘက်မှာ ပေါ်တူဂီတွေရှိတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေကို ခွင့်ပေးခဲ့တာရှိတယ်။ မွတ်စလင်တွေကိုလည်း ပေးခဲ့တာရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ဗုဒ္ဒဘာသာက အခြေခံအခိုင်အမာကြီး ရှိနေတယ်လေ လို့ပြောလိုက်တော့ . . .
ခုချိန်မှာကော ဒီလိုတခြားဘာသာတွေကို ခွင့်မပေးတာ တွေ့လို့လားမေးချင်တယ်။ “ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတယ်။ အင်မတန်မှ ထုနဲ့ထည်နဲ့ဆိုတော့ ဘာကြောက်စရာရှိလဲ လို့ ကိုမိုးသီးဇွန်က ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘာကိုမှ ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုလည်း ကိုမိုးသီးဇွန်ထင်ထားတာထက် အပြည့်ရှိပါတယ်။ ကိုမိုးသီးဇွန် ပြောသလို ယုံကြည်မှုရှိရင် ပြီးစတမ်းဆိုရင် တိုင်းပြည်တွေမှာတောင် စစ်တပ်တွေ ထားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အမေရိကန်အစိုးရက ကြည်း၊ရေ၊လေတပ်တွေ အကြီးအကျယ်တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းပြီး ကမ္ဘာ့စူပါ ပါဝါဖြစ်လာအောင် ကြိုးပမ်းနေတာတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိလို့လား ဒါမှမဟုတ် ကြောက်စရာရှိနေလို့ တွေးစရာပါ။
“ ကာကွယ်ရေး”ဆိုတဲ့အဓိပါယ်ကို ကိုမိုးသီးဇွန် သဘောမပေါက်လို့ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်တယ်၊ ဘယ်သူ့မှ မကြောက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကာကွယ်ထားရမယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ မျိုးစောင့်ဥပဒေအပေါ်မှာ ပေးတဲ့မှတ်ချက်ပါပဲ။ ကိုမိုးသီးဇွန်က ဒါကတော့ ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးလို့မြင်တယ်။ ဒီကိစ္စက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆန္ဒက အဓိကကျတယ်။ . . . ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်လို့မြင်တယ်”ဆိုတာပါပဲ။
မေးခွန်းမေးသူက လစ်ဘရယ်လိုက်ဇေးရှင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ စောစောကလို လူအများစုက မငြင်းဆန်ဝံ့တဲ့ ၊ မငြင်းဆန်ရဲတဲ့၊အခြေအနေလိုမျိုး ဥပဒေလိုမျိုးကို (မျိုးစောင့်ဥပဒေကို ဆိုလိုဟန်ရှိသည်။ စာရေးသူ) ကိုမိုးသီးဇွန်က ကန့်ကွက်လိုက်တာက နိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ ထောက်ခံမဲကျသွားနိုင်တယ်လို့ မယူဆဘူးလား လို့မေးပါတယ်။
ကိုမိုးသီးဇွန်က မယူဆဘူး စိန်တောင်ခေါ်လိုက်ဦးမယ် လို့ဆိုပါတယ်။ အကြံပေးရရင်တော့ ကိုမိုးသီးဇွန် စိန်ခေါ်ဖို့လည်း စိတ်မကူးနဲ့၊ ပါတီထောင်ဖို့လည်း မစဉ်းစားနဲ့တော့ ဒီလောက်နဲပပဲ ကိုမိုးသီးဇွန်ရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အမြော်အမြင်ကို သဘောပေါက်သွားကြပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်နဲ့အခု မတူတော့ဘူး။ ဟိုတုန်းက record ရဲ့ အစွန်းထွက်တောင် ထောက်ခံမှုမရနိုင်ဘူး။ ၂၅ နှစ်အတွင်းမှာ ကိုမိုးသီးဇွန်ဘာလဲ၊ ကျန်တဲ့လူတွေဘာလဲ သိကြပြီလေ။ ဒါကြောင့် တစ်ချိန်က ရွှေထီးဆောင်းတာကို မပြောတော့နဲ့၊ အဲဒီရွှေထီးက ဆွေးမြေ့နေလောက်ပါပြီ။ ကိုမိုးသီးဇွန်က ကြွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Messenger ကမေးခွန်းမေးသူကလည်း ကွတ်တိမေးလိုက်ပါတယ်။ ”” ကိုမိုးသီးဇွန်လို့ဆိုလိုက်ရင် အရင်က နိုင်ငံရေးဦးဆောင်သူတစ်ယောက် ကျောင်းသားတစ်ယောက်၊ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ကိုမိုးသီးဇွန်သတင်းတွေက အနုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ သတင်းတွေများတယ်။ နောက်ကျောင်းသားတွေ အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေပါ ပါနေတယ်။ အဲဒီပေါ်မှာရော?
မေးခွန်းက ချက်ကောင်းထိသွားတော့ အဖြေက မသဲမကွဲ ကဘောက်တိ ကဘောက်ချာ ဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်ဆုံးအမေရိကန်အစိုးရကို အကြောင်းကြားပြီး သူ့ကို အမေရိကန်မှာ တရားစွဲလိုက်ပါလို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ကိုနိုင်အောင်နဲ့ ကိုမိုးသီးဇွန်တို့အဖြစ်က ဦးနေ၀င်းတို့အဖွဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံကို ဗုံးခွဲတုန်းကလို လက်သည်ပေါ်ဖို့ ခက်သားလား။
စကားက ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ တိမ်ကြားရောက်သွားပုံက ကျွန်တော်က အမေရိကန်သွားတယ် (သွားပါ သွားပါ) Europe သွားမယ်။ (သွားပါ သွားပါ) သွားတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော့်ကို Gentleman တစ်ယောက်လို ယုံကြည်တယ်။ လက်ခံတယ်။ (လူကဲခက် အတော်ညံ့ကြတယ်) ၉၆၉ ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ်ပြောပြမယ်။ (ခုနကလို ၉၆၉ကို လုံးဝလက်မခံတဲ့အကြောင်းများလား)။
. . . ဒီမိုကရေစီ ဒီလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အစွမ်းအစကို သိလို့လည်းပါမှာပေါ့လေတဲ့။ အဲဒီလို ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော်လိုက်တော့မှ ပြောပြမှပဲ သိရတယ်ဗျာ)
ကိုမိုးသီးဇွန်က အဖမ်းခံရတာကို ထိုင်စောင့်နေတာလောက် ညံ့တာဘာရှိမလည်း။ ကိုယ်ကိုဖမ်းမယ်မှန်းသိရင် နိုင်ငံရေးသမားက တစ်ခုခုပြန်လုပ်ရမှာပေါ့ လို့ဖြေပါတယ်။ ထောင်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက် သံမဏိစိတ်ဓာတ်နဲ့ အဖမ်းအဆီးမကြောက်၊ ထောင်မကြောက်ဘဲ သတ္တိ၊ဇွဲနဘဲနဲ့ တော်လှန်ခဲ့သူ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကို စော်ကားတဲ့သဘောဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်အရ ကိုမိုးသီးဇွန်ရယ်၊ ကျားအနားမှာတင် ကျားနဲ့ယှဉ်ရဲသူနဲ့ ကျားကို အဝေတစ်နေရာကနေ ခဲနဲ့လှမ်းပစ်သူ ဘယ်သူသတ္တိရှိပါသလဲ။ ကိုမိုးသီးဇွန်ရဲ့ အမြင်ကို ကျွန်တော်လုံးဝ သဘောမတူပါဘူး။
နောက်ထပ်သဘောမတူတဲ့အချက်ကတော့ ကိုမိုးသီးဇွန် အသေအချာ မလေ့လာဘဲ မှန်းသမ်းရမ်းတုပ်သွားတဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမြင်ပါပဲ။
မျိုးစောင့်ဥပဒေမှာ “ မြန်မာဗုဒ္ဒဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို ဆရာတော်သံဃာတော်တွေ ဦးဆောင်ပြီး ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များက တောင်းဆိုလာကြရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ရေရှည်အတွက်ပါပဲ။ တခြားဘာသာတွေက သူတို့မိန်းကလေးတွေကို ထိမ်းမြားချင်ရင် သူတို့ဘာသာထုံးတမ်းကို အရင်ခံယူပြီးမှ လက်ထပ်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရေရှည်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲသွားဖို့တာက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားမှာ မျှတတဲ့ အပေးအယူ နားလည်မှုတွေရှိထားသင့်ပါတယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ တစ်ဖက်စောင်းနင်းဖြစ်နေခဲ့ရင် လူ့အဖွဲအစည်းတွေကြားမှာ အစိုင်အခဲတွေရှိလာပြီး ကြာလာရင် ဘာမဟုတ်တဲ့ မီးပွားတစ်စကျတာနဲ့ ထတောက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာဗုဒ္ဒဘာသာ မိန်းခလေးကို တခြားဘာသာဝင်နဲ့ လုံးဝထိမ်းမြားခွင့် ပိတ်ပင်တာမှမဟုတ်ဘဲ။ ပေးစားမယ်၊ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဒဘာသာကို ကူးပြောင်းပြီးမှ ပေးစားမယ်။ ဒီသဘောပါ။ ခင်များတို့၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သမီးတွေ၊ တူမလေးတွေကို ဘာသာခြားနဲ့ ပေးစားရတော့မယ်ဆိုပါတော့ ဒီဥပဒေရှိထားဖို့ မကောင်းဘူးလား။ ဒီဥပဒေမရှိရင် ကျွန်တော်တုိ့၊ ခင်များတို့ သမီးလေးတွေဟာ သူတစ်ပါးကျွန်ပြုသမျှနုရတော့မှာပါ။ ပထမတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်လို့ မလိမ့်တပတ်ပြောပြီး ယူမှာပါ။ အပျိုရည်လည်း ပျက်ပြီးရော ဆင်းတုတော် မထားရဘူး ဘုရားမသွားရ သံဃာရှိမခိုးရတော့မှာ။ ပြီးရင် သူတို့ဘာသာထဲကို ချောချည်တစ်ခါ ခြောက်ခါတစ်လှည့် သွင်းတော့မှာ မွေးလာတဲ့ သားသမီးလည်း ထိုနည်းအတူပါပဲ။
ဗုဒ္ဒဘာသာ မိန်းကလေးကို ယူပြီး သူတို့ဘာသာထဲ သွင်းနိုင်ရင် ဘယ်လောက်ထောက်ပံ့တယ်။ ကလေးတစ်ယောက်မွေးရင် ဘယ်လောက်ထောက်ပံ့တယ် ဆိုတာတွေလည်း ဒီဘက်က သံဃာတွေမှာ အထောက်အထားတွေနှင့် ရှိထားတော့ သူတို့ဘက်က ပြတ်ပြတ်သားသား မငြင်းရဲတာလည်း ဆိုးပါတယ်။
ကိုယ့်ဘက် ခြံစည်းရိုး မကာမိခဲ့တော့ အခုမှာ ကာဖို့လုပ်တာကို အထူးအဆန်း ဖြစ်နေကြတာပါ။
မြို့တစ်မြို့မှာ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို ဘာသာခြားက ဆဲဆိုတယ် ဘုန်းကြီးက ပဋိပက္ခမဖြစ်အောင် ရုံးမှာပဲ တရားစွဲတယ် ဆဲတဲ့သူ ထောင်ကျတယ်။ ဒီတော့ ထောင်ကျသူရဲ့ မိသားစုကို ဘာသာခြားတွေ သိန်း(၁၀၀)ကျော် ၀ိုင်းထောက်ပံ့တာ ဘယ်လိုသဘော ဖြစ်သွားနိုင်လဲ၊ ဘုန်းကြီးကို ဆဲရင် သိန်း(၁၀၀)ကျော် ပေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်မသွားဘူးလား ဒါတွေက အခုမှ ထဖြစ်တဲ့ အသစ်အဆန်းမဟုတ်ဘူး နှစ်ပေါင်းမျာစွာ ရှိလာခဲ့တဲ့ အစိုင်အခဲတွေ ဒီမျိုးစောင့်ဥပဒေပေါ်ထွန်းလာရင် နှစ်ဖက်ညီမျှသွားပြီး ငြိမ်းချမ်းလာမှာပဲ အမေရိကန်ကလာတဲ့ ကိုမိုးသီးဇွန် အများကြီးလေ့လာဖို့ လိုပါသေးတယ်ဗျာ။
22 August 2013 at 02:14:00 GMT+6:30
The person who wrote this article hae narrow mind...His aim is to fight KO MOE THEE ZUN..STUPID--
22 August 2013 at 08:11:00 GMT+6:30
I don't want to fight moe thee
22 August 2013 at 08:13:00 GMT+6:30